“Niraraka Toy Ny Orana Ny Baomba Tao Gaza” · Global Voices teny Malagasy
“Niraraka Toy Ny Orana Ny Baomba Tao Gaza”
Voadika ny 15 Novambra 2012 22:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, বাংলা, Ελληνικά, 한국어, Français, русский, Italiano, عربي, 繁體中文, 简体中文, Aymara, polski, Català, македонски, English
Tsy natory i Gaza nandritra ny alina satria nanohy nanafika ny Palestiniana i Isiraely. Nanomboka ny toe-draharaha raha nifampitifitra i Isiraely sy Gaza – izay mbola mitohy hatramin'izao – rehefa matin'i Isiraely nandritra ny fanafihana an'habakabaka an'i Gaza ny mpitarika ara-miaramilan'ny Hamas antsoina hoe Ahmed Al-Jabari [afak'omaly].
Araka ny tatitra nataon'ny gazety, nahafatesana Gazaita 13 sy Isiraeliana 3 ity fanombohan'ady ity. Avoakan'i Ebaa Rezeq ao amin'ny Twitter ny isan'ny iharam-boina amin'ny lafiny misy ny Palestiniana:
@Gazanism: niharam-boina hatramin'izao: maritiora 15 (anatin'izany zaza telo, vehivavy bevohoka iray sy ny zanany kambana ary zokiolona maromaro), ary 140 ny isan'ny naratra #Gaza
Khaled Shawa nizara ny sarin'ny akaikin'ny tranony may rehefa voadarok'i Isiraely. Sary inoana avy amin'i @KhaledShawa
Wael Ouda mitantara ny hasesin'ny fianjerana baomba manodidina azy:
@WillOuda: Tena “mandehandeha” ao amin'ny toera-pandraisam-bahiny mihitsy ny drones [voromby baikoan-davitra]….mitalakotrokotroka sy mitabataba ambony loha. #Gaza
Amin'ny sioka hafa, mandefa ny isan'olona ihara-pahavoazana iz taorian'ity fifampitifirana ity:
@WillOuda: Isan'ny maty: 14-15 ary mihoatra ny 120 naratra #Gaza
Gaza mizàka fanafihana. Saripikan'i @journeytogaza hita Twitter
Mikotaba i Majed Abusalama :
@MajedAbusalama: Miraraka sahala amin'ny orana ny baomba eto Gaza avaratra #GazaUnderAttacks
Mandritra izany fotoana izany, mamoaka lahatsary tsy mampino i Abu Omar hitao amin'ny YouTube mitondra ny lohateny hoe, Milalao baolina fandaka ny ankizy na dia misy aza ny daroka baomba:
Lahatsary mampiseho ankizy milalao – raha mitohy manodidina ny fipoahana.
Milaza ny heviny i Ola Anan:
@olanan: #GazaUnderAttack ary dia misy ny vondron'ankizy nanapa-kevitra hilalao baolina fandaka eny an-dalambe! Mampianatra ny fiainana izahay ry izao tontolo izao!
Ary manampy i Majed Abusalama:
@MajedAbusalama: Ambony ny maoralinay aty Gaza. Avelao potehiny ny zava-drehetra ary vonoiny ny zanakay fa tsy hahafaty na oviana na oviana ny faniriana sy ny nofinofinay ry zareo. Ho amin'ny fanafahana avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra!
Olona milahatra hividy mofo ao Gaza. Sary nozrain'i mpisera Twitter @sarahussein
Mandritra izany fotoana izany ny mpanao gazety Sara Hussein, izay afa-nivezivezy tao Gaza, mizara sarim-pilaharan'olona ivelan'ny mpivaro-mofo iray.
@sarahussein: yfrog.com/nws02mjj filaharana ivelan'ny mpivaro-mofo #Gazay. Matahotra tsy fisian-kanina ny olona. #Israel #Palestinians
Mampanontany tena ny fandehanana any Gaza raha hisy ny fanafihana an-tanety:
@journeytogaza: Misy vaovao avy amin'ny governemanta #Israeli ve raha misy na tsia ny fanafihana an-tanety any #Gaza?
Raha te-hanaraka ny resaka amin'ny Twitter hafa, amarino ny tenifototra: #PrayForGaza, #GazaUnderAttack ary #Gaza.
Vakinteny hafa (teny anglisy):